Laser Machine Jarida, Laser xardho Machine, Galvo Laser Machine - Laser Golden
KU SOO DHAWAADA laser HORREEYA
Laser HORREEYA diiradda saarayaa bixinta caaqil, digital, iyo xal laser iswada.
Manufacturer nidaamyada laser for jarida, xardho iyo sixitaanka. Takhasuska ee laser CO2 Mashiinka goynta iyo mishiinka laser Galvo.
Laga soo bilaabo marka hore la tashan in baaritaano codsiga qalab aad loogu talagalay in industry gaar ah tababarka dadka isticmaala iyo adeegga dunida oo dhan - HORREEYA laser bixisaa xal laser oo dhamaystiran, ma aha oo kaliya mashiinka hal!
ARAGTIDA laser magaabay
LABEL magaabay wiil laser
CO2 Laser magaabay wiil for Filter Maro / Warshadaha Safayn difaan
marsho sax High iyo hayayaashii. Goynta xawaaraha ilaa 1200mm / s. -Heer caalami laser RF biraha CO2 150W, 300W, 600W. conveyor Vacuum. quudinta Automatic, iyo hagaajinta xiisad.
Gear & hayayaashii Dadka degani CO2 magaabay wiil Laser for Technical Dharka
Mashiinka goynta laser marsho & hayayaashii kexeeyey waa xoog ku filan oo ay ku fulin karaan tube laser CO2 awood sare. Waxaa ka warqaba xawaaraha dardargelinta super sare iyo xawaaraha goynta la optics duulaya.
Xawaaraha Sare dhar Fabric Laser Jarida Machine
Waayo, dhexdhexaad ah & Dufcaddii yar oo noocyada kala duwan ee wax soo saarka dhar, gaar ahaan ku haboon dharka kartoo. miiska shaqada Conveyor, la shekeysan si toos ah iyo in ka badan dhererka xilliga kulaylaha.
Dual Head Laser Leather Machine Jarida Independent for kabaha
Marka laba maskaxood ay laser in madax bannaan u shaqayn ah midba midka kale jari karaan sawiro kala duwan oo isku mar. kala duwan oo ka mid ah processing laser (goynta laser, feedh, qeexada, iwm) waxaa lagu dhammeeyey kartaa hal mar.
Dabajooga in dabajooga Machine Flying Fabric Laser xardho
3D nidaamka Galvo firfircoon, dhameysteen xardho joogto ah sixitaanka in hal talaabo. "On Daqsi" technology laser. Habboon ee marada weyn format, dhar, maqaar, denim, cimlibaadhista xardho.
Leather Galvo Laser xardho Machine Jarida for Industry Shoe
xawaaraha Top iyo format Large xardho laser, perforating iyo goynta. nidaamka driving Dual qaab hayayaashii marsho. nidaamka galvanometer filaayo.
Xawaaraha Sare Galvo Laser xardho Machine kabta Leather
laser biraha CO2 RF 150W 300W 600W. nidaamka 3D firfircoon gacanta galvanometer. up Automatic iyo dhidibka Z hoos. miiska malabkii daawaha shaqada Automatic Slaam zinc-birta.
Galvo Laser Goynta iyo Perforating Machine for Jersey Fabric
A mishiinka laser oo isu in jari karaa, xaradhaa xaradhka, perforate iyo dhunkado-gooyaa, waayo, maaliyadaha, caag, microfiber, xataa dhar stretch.
Sublimation Fabric Laser magaabay wiil for qalabka ciyaaraha ee
laser Vision waa fiican ee jarida sublimation daabacaadda dhar dhar digital ah ee nooc kasta iyo qiyaas. Kamaradaha iskaan dhar ah, la ogaado oo la aqoonsado dusha daabacan, ama soo qaado on marks diiwaangelinta daabacan iyo gooyay naqshado doortay xawaare iyo saxsanaanta.
GOLDENCAM Diiwaangelinta Camera Laser magaabay
sax High marks diiwaangelinta qaabkaaga iyo magdhow lahayo ku caaqil, waayo, si sax ah u goynta laser ah sublimation dheeh daabacay logos, xarfaha iyo lambarada.
Laba Madaxda Independent Vision Camera Laser magaabay wiil Machine
Labada madaxdii nidaamka goynta laser madaxbanaanan waxaa lagu dhammaataan isku daro nidaamka aragtida smart, iyo sii filaayo in shuruudaha daabacay sawiro processing.
Format Wide Laser Machine Jarida for Calanka, calammo, jilicsan calaamado
The magaabay wiil laser aragti weyn oo si gaar ah waxaa loogu talagalay warshadaha ee print digital - saara awoodaha laga qabanin, waayo, ku dhameysteen format balaadhan oo dijital ah oo daabacan ama naqshadeynta dharka dheeh-sublimated, calammo iyo calaamado jilicsan.
Roll in dabajooga Label Laser Machine Jarida
Golden Laser ayaa codsatay technology laser warshadaha berrinkii sumadaha is-koolo dhiman goynta. Iyadoo our liiska rogo nidaamka goynta laser, aad dhimi kartid calaamadaha aad u hufan koolo, sumadaha ku daabacan, stickers, warqad, filim, iwm
dhinta Tani laser magaabay wiil web badnaan width 230mm, la CO2 RF laser 70W, 100W ama 150W. Iyadoo our liiska rogo nidaamka goynta laser, aad dhimi kartid calaamadaha aad u hufan koolo, sumadaha ku daabacan, stickers, warqad, filim, iwm
Laser dhinta Goynta Machine for milicsiga Waxyaabaha / Bedelka Film
Laser dhinta-jaray wax u milicsato, fiican ee warshadaha dharka-aragti sare. qalabaynta dhan-geedi socodka. Si hufan goynta laser
Waxaan bixinaa xal codsiga ku salaysan technology laser. Dooro warshadaha aad: xalka laser xaq ugu haboon ee aad u
Banner & CALANKA
Maqaar & KABAHA
Tube & biibiile
Iyada oo hal-abuurnimo technology xoog, Golden Laser waa awood si ay u bixiyaan mashiinada laser habka iyo xalalka, aad wax soo saarka dheeraad ah oo ku ool ah oo waxtar.
Sida abuurnimo farsamada Epoch-samaynta, laser horumar la faa'iidooyinka laga qabanin, bedelida hababka dhaqanka iyo aad u badan.
Systems Laser Buugga User
Had iyo jeer waxay bixiyaan taageero adeega. Injineerada la heli karo si mishiino adeega dibadda ah adeegidda loo xirxiro, adeega tababarka iyo adeega dayactirka.
Sax Warshadaha wadidda Wanaagsan
Solutions Laser Horseedka Bixiyaha
By waayo-aragnimo 20 sano in industry laser, si joogto ah horumarinta iyo isticmaalka teknoolajiyada sare, HORREEYA laser uu noqday saaraha ah ee hormuudka ka ah mashiinada laser leh awood ahaanayta casri ah.
HORREEYA laser aad bixisaa xal laser xirfadeed aad warshadaha codsi gaar ah - si ay kaaga caawiso la kordhiyo wax soo saarka, fududeeyo habka processing oo waxaad ka samaysaa faa'iido dheeraad ah.
In suuqa dibada, HORREEYA laser waxay samaysay shebekad marketing baaluq in ka badan 100 dal oo dunida oo dhan iyo gobollada, iyadoo waxyaabaha our tartan iyo nidaam-abuurnimo suuqa-oriented.